कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै के-केमा लगाइयो रोक ? - Baikalpikkhabar
कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै के-केमा लगाइयो रोक ?
बैशाख १३, काठमाडौं / गएपछि काठमाडौंमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, भेला गर्न रोक लगाइएको छ ।
काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेश सपिङ मल, सिनेमा हल, सैलुन आदि सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ ।
बैशाख १६ गतेदेखि एक सातासम्म निजी र सार्वजनिक सावरी दुवै चलाउन नपाइने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनमा रोक लगाइनेछ भने अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्यलाई काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।
सोमबार, १३ बैशाख, २०७८, साँझको ०७:५९ बजे